Izikolo ezili-13 zeBhodi eziPhambili eNgilani zaBafundi beZizwe ngeZizwe 2022
Ndibheja ukuba ubungazi ukuba kukho izikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe. Esi sithuba sebhlog siqaqambisa kwaye sixoxa ngezi zikolo, kunye nokubonelela ngezixhumanisi zesicelo apho unokwenza eminye imibuzo kwaye uqalise inkqubo yokwenza isicelo.
Umfundi welinye ilizwe ligama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ukubhekisa kubafundi abavela kwamanye amazwe abaza kwelinye ilizwe ngeenjongo zokufunda. Nangona kunjalo, xa usiva ibinzana elithi "umfundi welinye ilizwe" ingqondo yakho iya kwangoko kubafundi abaya kufunda kumaziko emfundo ephakamileyo okanye kwizikolo zasesekondari kwelinye ilizwe bengakhange baqonde nokuba ligubungela wonke umfundi kubandakanya abafundi bezikolo eziziisekondari okanye eziphakamileyo.
Njengokuba kukho amaziko emfundo ephakamileyo eNgilani nase-UK xa iyonke eyamkela abafundi bamanye amazwe, kukwakho nezikolo ezininzi eziziisekondari ezamkela abafundi bamanye amazwe. Kungenxa yoku ukuba sipapashe le bhlog yethu kwizikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe. Ukunceda ukubonelela ngolwazi olunobuchule kubazali nakwabagcini abafuna ukuthumela abantwana babo okanye iwadi kwisikolo sokubhoda eNgilane.
Izikolo ezininzi eNgilani ngoku zamkela abafundi bamanye amazwe abavela kwihlabathi liphela. Benza amalungiselelo okuba baqinisekise ukuba bakwimeko yokufunda ekulungeleyo ukufunda kwabo. Kuba aba bantwana belishiya ilizwe labo lokuzalwa, isikolo kufuneka siqinisekise ukuba bonwabile kwindawo yabo entsha.
Ngaphandle kwalonto, uninzi lwezi zikolo zibonelela ngeendawo zokulala okanye izindlu zokubhoda ezifumanekayo zokuba abafundi baphesheya baphumelele. Isikolo esihle sokubhoda eNgilane kufuneka sibe nemfundo ephezulu, indlu yokuhlala, kunye nezixhobo zokufunda, ezothutho kunye neenkonzo zokuzilolonga, kunye nezixhobo izinto ozenza ngaphaya kwemisebenzi.
Zininzi izibonelelo zokuya kwizikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe, ezinje ngokubonelela ngendlela ekhuselekileyo kwiiyunivesithi eziphezulu, imfundo ekumgangatho wehlabathi, izindlu zokubhoda ezixhotyiswe kakuhle, ukutyibilika kolwimi, ukuphazamiseka okuncinci, kunye nokuvezwa kunye namava esixeko samanye amazwe. Ezi zezinye zezibonelelo zokuya kwisikolo sokubhoda eNgilane.
1 Yintoni iSikolo seBhodi eNgilani?
2 Ngaba aBafundi baMazwe ngaMazwe bangaFunda kwiZikolo eziBhodini eNgilane?
3 Iimfuneko zokufaka isicelo kwisikolo sokubhoda eNgilane
4 Izikolo eziBalaseleyo zeBhodi eNgilani zaBafundi beZizwe ngezizwe
4.1 1. I-DLD College yaseLondon
4.2 2. Isikolo iRossall
4.3 3. Isikolo iMount Mill Hill International
4.4 4. Isikolo iWestminster
4.5 5. Isikolo iMarymount International London
4.6 6. I-Ashbourne ezimeleyo iFomu yeSithandathu yeKholeji
4.7 7. Isikolo iKensington Park
4.8 8. Isikolo sabucala iBrentwood
4.9 9. Isikolo iHarrow
4.10 10. Isikolo sasePortland Place
4.11 11. Isikolo iRoyal Russell
4.12 12. IKholeji yoMdlalo kaDavid
4.13 13. Isikolo sabucala iQueenswood
5 Ii-FAQs kwizikolo zeBhodi e-England yaBafundi beZizwe ngeZizwe
5.1 Ixabisa malini isikolo ekuhlalwa kuso eNgilane?
5.2 Ngaba abafundi bamanye amazwe banokuya kwisikolo sokubhoda eNgilane?
5.3 Ngaba zikhona izikolo zokubhoda zasimahla eNgilane?
5.4 Ngaba amaMelika angaya eNgilane kwizikolo zokubhoda?
Yintoni iSikolo seBhodi eNgilani?
Ukubhoda eNgilane sisikolo esibonelela ngemfundo eqhelekileyo kunye nendawo yokuhlala kunye nokutya kwabafundi ngexesha lekota.
Ngaba aBafundi baMazwe ngaMazwe bangaFunda kwiZikolo eziBhodini eNgilane?
Ewe abafundi bamazwe aphesheya banokuya kwizikolo zokubhoda eNgilane, iyakubanceda ukuba bathethe isiNgesi ngokutyibilikayo esiya kuthi sibancede ngakumbi esikolweni okanye basebenze naphi na emhlabeni. Iya kubanceda ukuba baziqhelanise nendalo kwaye ukungena kwimfundo ephakamileyo eNgilane kuya kuba lula kakhulu.
Iimfuneko zokufaka isicelo kwisikolo sokubhoda eNgilane
Kubafundi bamazwe aphesheya, imfuneko yokufaka isicelo kwisikolo sokubhoda eNgilane kukuba ne-visa yabafundi, gcwalisa ifom yesicelo sesikolo osithandayo, kwaye uhlawule iifizi zesicelo kunye nesifundo. Oku kufuneka kwenziwe ngabazali.
Izikolo eziBalaseleyo zeBhodi eNgilani zaBafundi beZizwe ngezizwe
Apha ngezantsi luluhlu oluhlanganisiweyo lwezona zikolo zibalaseleyo e-England zabafundi bamanye amazwe kunye neenkcukacha zabo ezixoxwe ngezantsi apha ngezantsi;
I-DLD College yaseLondon
Isikolo seMount Mill Hill International
Isikolo samazwe aphesheya iMarymount eLondon
I-Ashbourne yeZikolo eziSithandathu ezizimeleyo zeKholeji
Isikolo saseKensington Park
Isikolo sabucala saseBrentwood
Isikolo sasePortland Place
Isikolo iRoyal Russell
KwiKholeji yeMidlalo kaDavid
Isikolo sabucala saseQueenswood
1. I-DLD College yaseLondon
Ikholeji yaseDLD sesinye sezikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamazwe aphesheya abanendawo yokufunda efanelekileyo kunye neendawo zokulala ukuze zilungele iimfuno zabafundi kwaye zibenze bahlale kamnandi ngokungathi abasuki ekhaya. Le kholeji yasekwa ngonyaka we-1931 embindini weLondon ejonge uMlambo iThames kunye neWestminster, ikwalilitye elivela kwiiNdlu zePalamente.
Ikholeji inikezela ngezifundo ezahlukeneyo kunye neenkqubo kubandakanya i-A-Level, GCSEs, BTEC, kunye neNkqubo yeZiseko zaMazwe ngaMazwe kubafundi abaneminyaka eli-14 ukuya kweli-19 ubudala. Sisebenzisa indlela yokufunda enobuhlobo kwaye eguqukayo, isikolo sinokukhulisa ukuzithemba kwabafundi kubuchule babo. Kwaye ubungakanani beeklasi ezincinci buvumela unxibelelwano lwabafundi nabasebenzi abazinikeleyo nabajolise kuko.
2. Isikolo iRossall
Isikolo iRosall sesinye sezikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe abanembali ende yokuthandana kude kwangowe-1844 kwaye yamkela abafundi abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo. Isikolo sizibophelele ekukhuthazeni abantu abancinci ukuba baphuhlise amandla abo ngokubanika amava okuqala okufunda ngaphakathi komxholo woluntu olunomdla nolunenkcubeko.
Abafundi abaneminyaka yobudala eyi-0-18 bangeniswa kwiiklasi ezahlukeneyo ezifunekayo kubudala babo kunye namandla abo. Kukwakho neelabhoratri ezikumgangatho ophezulu kunye nezinye izibonelelo zokufunda kunye nezixhobo zemisebenzi yasemva kweeyure zesikolo ebalulekileyo kuphuhliso lwemfundo yabafundi. Abafundi abanesiNgesi esigqwesileyo banokubhalisa kwizifundo eziqhelekileyo (okanye "ezona zikolo ziphambili"), ngelixa abo bafuna ukuphucula isiNgesi sabo banokubhalisa kwizifundo ezikhawulezayo zamanye amazwe.
3. Isikolo iMount Mill Hill International
Isikolo i-Mount Mill Hill International sikwisikolo esidumileyo iMill Hill kwaye savulwa ngo-2005 ukulungiselela abafundi bamanye amazwe ukuba bafunde e-UK, baziqhelanise nolwimi olutsha, kunye nenkqubo entsha yenkcubeko, yezentlalo kunye neyemfundo. Esona sikolo siphambili - iMill Hill School - yasekwa ngo1807 kwaye ithathwa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo eLondon zokufundisa abemi baseBritane kunye namazwe aphesheya aneminyaka eli-13 ukuya kweli-18.
Isikolo i-Mount Mill Hill International sesinye sezona zikolo zibalaseleyo e-England zabafundi bamazwe aphesheya abanendawo yokuhlala efanelekileyo, evulekileyo yasehostele- eColinson House- esembindini wekhampasi. Kukho amagumbi ahlukeneyo amakhwenkwe namantombazana anabantu aba-1-3 abahlala kwigumbi. Isikolo sikwaxhotyiswe ngezixhobo zemidlalo ezigqwesileyo apho abafundi banokuthi bazibandakanye kwiintlobo ezahlukeneyo zemidlalo ezinje ngokuqubha, i-aerobics, iqakamba, ibadminton, ibasketball, intenetya, isikwashi kunye nejimnastics.
4. Isikolo iWestminster
Isikolo iWestminster sesinye sezikolo zokubhoda eNgilane ezibonelela ngeenkonzo zemini kunye nezokubhoda kubafundi abavela kwihlabathi liphela, besamkela ukwahluka kweenkcubeko, amava kunye nemvelaphi yemfundo abayizisayo. Inkqubo yokwenza isicelo yabafakizicelo bamazwe aphesheya iyafana neyabemi base-UK, ke ngoko, abafundi banokuthatha uviwo lokungena kwilizwe labo kodwa kufuneka beze esikolweni kudliwanondlebe ngalo mhla bamenywe ukuba beze.
Enye imfuno yabafakizicelo bamazwe aphesheya kukuba kufuneka bathethe isiNgesi ngokutyibilikayo, abafundi abafundiswe ngesiNgesi iminyaka emithathu ubuncinci ngaphambi kokuza eWestminster School bakhetha. Abafundi abaneminyaka esixhenxe ukuya kweli-7 bayamkelwa esikolweni. Iindawo zokulala ezinempahla efanelekileyo, iilebhu, kunye nezixhobo zemidlalo zibonelelwa ukuphucula imfundo yabafundi kunye nokudala imeko yokufunda efanelekileyo.
5. Isikolo iMarymount International London
Isikolo iMarymount sasekwa e-1955 yiNkolo yeNtliziyo eNgcwele kaMariya njengosuku oluncinci oluzimeleyo lwamaKatolika kunye nesikolo sokubhoda samantombazana aneminyaka eli-11 ukuya kweli-18. Ikwamkela abafundi abavela kwamanye amazwe besenza esinye sezikolo zokubhoda eNgilani kumazwe aphesheya. abafundi abazinikele ngokupheleleyo kwimfundo, ngokweemvakalelo, ngokomoya nangokwentlalo yophuhliso lwabafundi bayo.
Amantombazana aphuma kwezinye izithethe kunye nenkcubeko ayamkelwa esikolweni ukubalungiselela iinkqubo zayo ezizodwa ze-IB. Ikhompyutha yokusika kunye neelebhu zobugcisa, kunye nezixhobo zemidlalo, ziyafumaneka esikolweni.
6. I-Ashbourne ezimeleyo iFomu yeSithandathu yeKholeji
Ikholeji yaseAshbourne sisikolo esizimeleyo sabucala eLondon esibonelela ngezifundo zenqanaba elingaphezulu kweminyaka engama-35 ukuya kubafundi base-UK nakwabafundi bamanye amazwe. Ikholeji ibonelela ngeenkonzo zokubhoda kunye nezeentsuku kunye nenketho yokufunda umgama kwi-Intanethi. Sesinye sezona zikolo zibalaseleyo eLondon onokufuna ukuthumela umntwana wakho okanye iwadi kuye, ukonwabela imfundo esemgangathweni.
Ngalo lonke ixesha lokuhlala komfundi eAshbourne, babelwa umhlohli ongumntu obabonelela ngenkxaso kwezemfundo nakwezolwalathiso. Isikolo sikwabonelela ngeenkqubo ezizodwa zesicelo seyunivesithi kwizifundo ezinokhuphiswano ezinje ngeMicrosoft, ezeMali, ubuNjineli, kunye nezifundo ezinxulumene noko kunye nokungena kwiiyunivesithi zaseCambridge naseOxford.
7. Isikolo iKensington Park
Isikolo saseKensington Park simi embindini weLondon kwaye yasekwa ngonyaka we-2017 ibonelela ngemfundo yesibini kubafundi abaneminyaka eli-11-18 ubudala. Yamkela abafundi abaxubileyo kuzo zonke iimeko zentlalo noqoqosho, inkcubeko kunye nenkolo. Oku kwenza ukuba isikolo sibe sesinye sezikolo zokubhoda eNgilane njengoko sibonelela ngendawo yokuhlala yehostele efanelekileyo kubafundi bamanye amazwe ababhalise esikolweni.
Iinkqubo zikwakhona kubafundi abaneminyaka esi-7 ukuya kweli-9 ubudala kodwa kufuneka babe ngabafundi bemini. Amanqanaba kunye neenkqubo ze-GCSE zikwabonelelwa ukulungiselela abafundi ukuba bamkelwe kwiiyunivesithi eziphambili e-UK. Kukho iqela lokwamkelwa elizweni liphela elihlala lilungele ukunceda abafundi bamanye amazwe ukuba balungiselele uhambo lwabo kwiSikolo saseKensington Park.
8. Isikolo sabucala iBrentwood
Isikolo sabucala i-Brentwood sesinye sezikolo zokubhoda eNgilane, esekwe kwi-1557 kwaye isasebenza ngokubonelela ngemfundo elungileyo yangaphambi kweyunivesithi kubafundi abaneminyaka emi-3 ukuya kweli-18. Kuphela ngabafundi abaneminyaka eli-13 nangaphezulu abanokuhlala ehostele okanye kwiindawo zokulala njengabahambi.
Isikolo sibonelela ngeenkqubo zemfundo kwi-GCSE, A-Level, kunye ne-IB ngelixa iikhosi zezifundo zesiNgesi zinikezelwa kubafundi bamanye amazwe. Phakathi kwezixhobo zesikolo kukho igumbi lomculo elinezixhobo ezahlukeneyo zomculo zabafundi abafuna ukubandakanyeka emculweni.
9. Isikolo iHarrow
IHarrow School kuphela kwesikolo samakhwenkwe e-England esasekwa e-1572 kwaye sibonelela ngeenkqubo zemfundo kumanqanaba e-A, kwisikolo esiphakamileyo nakwi-GCSE. Ngomnye wamakhwenkwe aphezulu- aneminyaka eyi-13 ukuya kwi-18-kwizikolo zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe ababonelela ngemfundo yasendulo yemigangatho yaseBritane.
Isikolo sineziko lemisebenzi eyongezelelweyo enemidlalo eyenzelwe abafundi ukuba babandakanyeke kuyo, kubandakanya ibhola yomnyazi, ikarati, ibhola ekhatywayo, ukuqubha, ipolo yamanzi, iJudo, iqakamba, igalufa nezinye ezininzi.
10. Isikolo sasePortland Place
Ifumaneka entliziyweni yeCentral London kwaye yamkela amakhwenkwe namantombazana aneminyaka eyi-10 ukuya kwi-16 iminyaka yenye yezona zikolo zibalaseleyo e-England zabafundi bamanye amazwe- iPortland Palace School. Isikolo sinikezela ukwamkelwa kubemi base-UK kunye nabafundi bamanye amazwe abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo kwaye bababeka ndawonye ukufezekisa injongo efanayo-ukuhlangabezana neenjongo zabo zemfundo.
Kukho iindawo zokulala ezahlukileyo zamakhwenkwe namantombazana ezinabafundi aba-1 ukuya kwabathathu abahlala kwigumbi. Amagumbi afanelekile kwaye indawo yokufunda ikwanazo nezixhobo zokwenza ukuba ukufunda kwabafundi kube yinto eyonwabisayo nenomdla.
11. Isikolo iRoyal Russell
Isikolo iRoyal Russell sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zabucala eNgilane zabafundi bamanye amazwe. Yayisungulwa kwi-1853 kwaye igcina ukubonelela ngeenkqubo zokufunda ezintsha ukuza kuthi ga ngoku. Iinkqubo zinikezelwa kwiiklasi eziphakathi, i-GCSE / IGSCE, kunye nenqanaba labafundi abaneminyaka eli-11 ukuya kweli-18. Imini kunye neenkonzo zokubhoda zinikezelwa sisikolo, ukubhoda ngokukodwa abafundi bamanye amazwe. Kukwakho namangenelo abafundi abaneminyaka emi-3 ukuya kweli-11 ubudala kudidi lwesikolo esincinci.
12. IKholeji yoMdlalo kaDavid
Esi sesinye sezona zikolo zihle kakhulu zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe esekwe kwi-1974 kwaye yenye yeekholeji ezizimeleyo zeSithandathu zeFomu eLondon zabafundi abaneminyaka eli-13 ukuya kwengama-22 ubudala. Iinkqubo ze-A-Level kunye ne-GCSE zikwabonelelwa amakhwenkwe namantombazana abhalise esikolweni.
Abafundi abaphumelele kwiDavid Game banikezelwa ukwamkelwa kwezinye iiyunivesithi zase-UK ezinje nge-UCL, Imperial, Oxford, kunye neCambridge.
13. Isikolo sabucala iQueenswood
I-Queenwood sisikolo sokubhoda sabucala samantombazana aneminyaka eli-11 ukuya kweli-18 anikezela ngeenkqubo zemfundo ze-GSCE kunye ne-A ezenza ukuba zilungele ezona yunivesithi zidumileyo e-UK nakwihlabathi liphela. Uluntu luyinto edlamkileyo neyantlukwano apho abafundi banokufunda kwindawo ebanzi, eyonwabisayo nenomdla kwaye boyise nayiphi na imiceli mngeni yokufumana iziphumo ezigqwesileyo.
Abafundi banokuzibandakanya kwimisebenzi yangaphandle emva kwezixhobo zemidlalo ezibonelelwa sisikolo. imisebenzi ibandakanya intenetya yetafile, ihoki, izakhono zokuzikhusela, i-aerobics, ukukhwela ihashe, ibhola, ukurola, i-gymnastics, nezinye ezininzi.
Ezi zizikolo eziphezulu ze-13 zokubhoda eNgilane zabafundi bamanye amazwe, unokuthatha isigqibo sokuya kwizikolo ezixubeneyo okanye ezahlukileyo zebhodi, nokuba yeyiphi na esebenza ngcono kumntwana wakho. Kwakhona, njengomfundi wamazwe aphesheya, imali yokufunda yomntwana wakho iphakame kakhulu xa kuthelekiswa nabemi.
Ii-FAQs kwizikolo zeBhodi e-England yaBafundi beZizwe ngeZizwe
Ixabisa malini isikolo ekuhlalwa kuso eNgilane?
Iindleko zesikolo sokubhoda e-UK ziyahluka ukusuka kwisikolo ukuya kwisikolo kodwa inokubiza phakathi kwexabiso lama- £ 20,000 ukuya kwi- £ 30,000 ngonyaka ngomntwana.
Ngaba abafundi bamanye amazwe banokuya kwisikolo sokubhoda eNgilane?
Ewe, abafundi bamanye amazwe banokuya kwisikolo sokubhoda eNgilane, kwaye uninzi lwezi zikolo zidwelisiwe kwaye zaxoxwa kule posi yebhlog, yifunde ngononophelo uqale isicelo sakho ngexesha elifanelekileyo.
Ngaba zikhona izikolo zokubhoda zasimahla eNgilane?
Izikolo zokubhoda zikarhulumente eNgilane zibonelela ngemfundo yasimahla kodwa abafundi kuya kufuneka bahlawule iifizi zokubhoda.
Ngaba amaMelika angaya eNgilane kwizikolo zokubhoda?
Ewe banako kodwa inkqubo yemfundo apha yahlukile kwindlela eyiyo e-US.
Izizathu ze-7 zokuba kutheni kufuneka ucinge ngokufunda e-UK
Ukufundiswa okupheleleyo kwee-Scholarships kubafundi bamazwe ngamazwe e-UK
Izikolo zokubhoda eNgilani zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Ungaba njani nguNjingalwazi weKholeji yoLuntu
Okulandelayo Post:Ngaba Umsebenzi we-ESOL wokuFundisa yeyona ndlela ilungileyo kuwe?